Isikhala sokwenza indawo: yiziphi izingxenye futhi kungani zidinga
Igumbi lokuphumula igumbi lokulala, igumbi lokudlela, igumbi lokutadisha ngisho negumbi lokugqoka. Inkinga yezindlu isakwesibhakabhaka: indlela yokuhlomisa kahle isikhala esincane? Ukulungiswa okufanele kuyosiza ukuxazulula le nkinga ngokusebenza okuncane kanye nezimali.
Izingxenye ezihleliwe zingcono kakhulu ekamelweni elikhulu. "Ukwengeza" izindonga ze-monolith ezenziwe ngezitini noma izingqinamba ze-foam zakha indawo egcwele yokuzimela, ikhululekile ukuphumula noma amakilasi. Yiqiniso, kufanelekile ukukhumbula ukuthi lezo zakhiwo ezinkulu ziyi-version yokugcina - indawo yabo kufanele iqinisekiswe ngokucophelela. Inketho eyengeziwe yentando yeningi - ukuhlukumeza okungaqondakali kusuka ebhodini le-gypsum: isithunzi sabo esicacile ngumnotho. Kwodonga lwebhodi le-gypsum, ungakwazi ukuguqula izintambo, ukukhanyisa ukukhanyisa noma ukuhlobisa izindwangu.
Izingqikithi ezikhanyayo ezenziwe ngamapulangwe, ingilazi noma amaplastiki weplastiki zengeza ubuhle kuya ngaphakathi. Zifakwe kahle kuma-studio amafulethini noma amakamelo amancane: izindonga ezingenamsebenzi zakha isimo sobuzwela, hhayi "ukudla" amamitha ayigugu endaweni. Ukusebenza kwezakhiwo kungenziwa ukwanda ngokuzinikeza ngamashalofu ahlukahlukene kanye nokuhlola.
Emakamelo amancane noma amakamelo amancane, kungcono ukusebenzisa izingxenye zeselula. Bangakwazi ukufaka ama-panels kuma-hinges noma emigwaqweni, amakhethini anamandla noma izikrini, futhi kwezinye izimo - ngisho namanzi asezindaweni ezinamandla kanye "nezinga" ezivela ezitshalweni. Ngisho indlela enjalo "evamile" yokuklanywa kwemvelo ithuthukisa kakhulu idizayini kanye ne-ergonomics yangaphakathi.
Isakhiwo sefulethini: isitayela saseScandinavia
Ingaphakathi ngesitayela sase-Afrika - isimo samanje-2016
Umbala we-Peach ngaphakathi
Amakamelo okulala aseFeng Shui amabili
Indlela yokukhetha ukwakhiwa kwekamelo labantwana
Iziphi izithombe ezifakwe ekhishini?
I-porcelain tableware. Ukukhetha okunamandla nokunakekelwa
Kusukela ezinyangeni eziyisithupha kuya eziyisikhombisa: imithetho yemenyu yokugubha izingane
Amaqanda abhakawa isipinashi
I-cpositation liposuction: okuyinhloko yenkambiso, izinkomba nokuphikisana
Izimpawu nokudla okunempilo ku-psoriasis
UDaria Moroz wembula zonke izimfihlo zochungechunge elithi "Ubugebengu"
Isipho esingcono kakhulu kwengane: Corella Nymph
5 imithetho yokuqinisa ubudlelwane
Ifoni ephathekayo: okuhle noma kubi?
Amakhukhi e-Lenten on ijusi yetamatisi
Ukupheka kwezitsha ezilula nsuku zonke
Ngingalala esiswini sami?
Abathandekayo abathandekayo, funda ukwenza massage lobuchwepheshe ngokwakho
Ungasusa kanjani iphunga lokujuluka kwezembatho?
I-compress cherry ekheniwe ngamathambo futhi ngaphandle. Zokupheka ezihlwabusayo futhi ezilula ze-cherry zihlanganisa i-cherry ebusika
Inkukhu isaladi ngamakhukhamba aqoshiwe